Maurizio Sarri “Chelsea kuma guuleysan doonto horyaalka.” | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Maurizio Sarri “Chelsea kuma guuleysan doonto horyaalka.”
Maurizio Sarri “Chelsea kuma guuleysan doonto horyaalka.”
Himilo FM – Tababaraha kooxda Chelsea Maurizio Sarri ayaa sheegay in aysan macquul aheyn inay sannadkaan ku guuleystaan horyaalka Premier League.
Sabtidii, kooxda Leicester City ayaa garoonka naadiga Chelsea kaga badisay natiijo 1-0 taasi oo keentay in uu shaki soo galo u tartamidda booska afaraad,waxayna 11 dhibcood ka hooseeyaan hoggaamiyayaasha horyaalka ee Liverpool.
Kooxda Blues ayaa billowgii ololahaan 2018-19 ku bilaabatay si awood leh laakiin waxay hadda khasaareen seddex kamid ah lixdii kulan ee ugu danbeysay Premier League. Sarri ayaa sheegay in kooxdiisa aysan marnaba fursad u heli karin inay horyaalka qaadaan xilli ciyaareedkan.
“Waxay ahayd wax aan suurtagal ahayn billowga xilli ciyaareedkaan,”Sarri ayaa u waramay BBC Sport.
Waxa uu intaa raaciyay “Sidii aan ku sheegay billowgii horyaalka Premier League, ma ahan mid suurtagal ah inaan la qabsano Liverpool iyo Manchester City, waa in aan ka taxadarnaa sidii aan ku joogi laheyn booska afaraad ee horyaalka.”
Chelsea waxay kulanka xigga u martin doontaa naadiga Watford kulamada Boxing Day.
Previous: 18 sanno kahor ayuu u iibiyay hadiyad laakiin sanadkan ayay ka guddoontay!
Next: La kulan: gabadha aragga la’ ee doonaysa inay fuusho buurta Everest